Zimbabwe suspends mobile payments to stop the national currency from collapsing. - CryptosOnline.com
Zimbabwe suspends mobile payments to stop the national currency from collapsing.
As Zimbabwe’s currency crisis continue to escalate, the government announced to suspend all mobile payments, including operations by dominant provider Ecocash. In a historic decision, the government also ordered the Zimbabwe Stock Exchange to stop trading. The government claims that the decision is taken to avert a conspiracy to sabotage the collapsing Zimbabwe dollar. Millions […]
Previous post Australians lost over $14 million in crypto-related scams in 2019.
Next post Mining Giant BHP has traded $14 million worth Iron Ore using blockchain.